FIIRSO Isbarbardhig 2-badii Sano Ee Ugu Horreysay Madaxweyneyaasha Xasan Sheekh iyo Farmaajo! – War La Helaa Talo La Helaa
Maanta waa February 8, 2019, waxaa 2 sano laga joogaa doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, kaas oo sida uu afkiisa ka sheegay loo bixiyey “Farmaajo high expectations”, rajo weynna laga qabay inuu isbeddel keeno dhanka amniga,
siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhismaha dowladnimada.
Haddaba, waxaa ay xog uruurin ballaaran lagu sameeyay isbarbardhigga waxqabadka 2-badii sano ee ugu horreysay ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh iyo middan madaxweyne Farmaajo.
Amniga: 2-badii sano ee ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh waxaa la dhisay wasaaradda gashaandhigga, xerada tababarka Nac-nac iyo golaha amniga qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijka“high level detection program” oo xilligaas la hirgeliyey waxaa isku soo dhiibay 70 sarkaal oo ay ku jireen Xasan Daahir iyo Atam, waxaana Muqdisho laga qaaday 60 isbaaro.
Muddadii 2da-sano ee ugu horreysay dowladdii Xasan Sheekh waxaa min hal jeer la beddelay taliyeyaasha NISA, xoogga dalka, booliiska iyo xataa wasiirka gashaandhigga: NISA: (Axmed Fiqi oo lagu beddelay Bashiir), xoogga dalka ah(Gen.C/qaadir Diini oo lagu beddelay Daahir Aadan Cilmi) Booliiska(Cabdixakim Daahir Saacid) iyo wasiirka gashaandhigga oo la dhacay xukuumaddii Shirdoon.
Dowladda madaxweyne Farmaajo 2-badii sano ay joogtay waxaa ka tagey 3 taliye sirdoon ( C/llaahi Gaafow Maxamuud, C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe iyo Xuseen Cusmaan Xuseen), waxaa jooga taliyihii 4aad ee xoogga dalka( General Maxamed Aadan Axmed (Buud), Gen, Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid, S/Gaas Cabdiweli Jaamac Xuseen (Gorod) iyo Sarreeye Gaas Daahir Aadan Cilmi (Indha Qarshe), waxaa jooga oo kale booliiska taliyihii 4aad( Gen. Sheekh Xasan Xaamud, Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid, Gen. Mukhtaar Xuseen Afrax iyo Bashiir Cabdi Maxamed halka abaanduulaha xoogga dalka iyo asluubta ay la joogaan mid weliba kii 3aad.
2-badii sano ee ugu horreysay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh waxaa Al-shabaab laga qabsaday gobollo badan: Galmudug, waxaa ka mid ahaa: Ceel-buur, wabxo, Sh. Dhexe waxaa ka mid ahaa: Jowhar, Mahadaay iyo Balcad…, Hiiraan: Buulo-burde, Maxaas iyo Jalalaqsi iyo meelo kale, Jubbaland: Waxaa Al-shabaab laga saaray Gedo:, Baar-dheere, Barwaaqo halka Jubbada Hoose laga saaray Kismaayo, Buulogudud, Mugaanbow, Baar Sanguuni iyo meelo kale, Koofur Galbeed: Bay waxaa laga saaray Diin-soor, Halka Bakool laga qabsaday Xudur, Waajid, Tiyeyglow iyo Rabdhuurre, Shabeellada hoose: Wanla-weyn, Baraawe, Marka iyo Qoryooley.
2-bada sano ee madaxweyne Farmaajo lama qaadin dagaal weyn, Al-shabaab waxay dib u qabsatay magaalooyin badan, laakiin waxay dowladda furtay uun jidka xeebta ah ee Muqdisho illaa Marka, isla jidkaas 2-badii bil ee ugu dambeysay waxaa lagu dilay taliyeyaashii isaga kala dambeysay ee guutada 12-ka April.
Kaddib booqashada madaxweyne Xasan ee Mareykanka January 17, 2013, waxaa la qafiifiyey cunnaqabateynta hubka, weliba Obama ayaa saxiixay in taageero militari la siiyo Soomaaliya April 1, 2013. Dowladda Xasan Sheekh waxay heshiis la gashay Turkiga iyo Talyaaniga inay tababar dibadeed siiyaan saraakiisha ciidanka Soomaaliya. Waxay Turkiga kula heshiisay in la dhiso xero weyn oo lagu tababaro ciidanka Waa tan Jasiira. Waxay kaloo ku guuleysatay in ciidamadii lagu tababari jiray Uganda tabarkooda loo Soo wareejiyo Muqdisho.
Intii uu joogay madaxweyne Farmaajo, Mareykanka waxay qeybo ka mid ah ciidanka xoogga dalka ka joojiyeen saanaddii Militari iyo mushaarkii, waxaa xusid mudan in Trump uu saxiixay kordhinta duqeymaha ka dhanka ah Al-shabaab, waxaa uu sidoo kale Soomaaliya ku daray dalalka ka mamnuuca ah inay u safraan Mareykanka.
Dhaqaalaha: 2-badii sano ee ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga shaqeysiiyey bangiga dhexe, waxaa uu sameeyey miisaaniyaddii ugu horreysay burburkii kaddib oo gaareysa $114,355,852, isaga oo golaha shacabka hor-keenay xisaab-xirka sannad walba. Madaxweyne Xasan markii uu yimid waxuu GDP dalka ka qaaday 2012-kii 1.2% (1.4 oo 2013 ah iyo 0.4 oo 2014 ah, waxaa xusid mudan in uu 2016-kii uga tagay 4.4.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa uu dalka qabsaday isaga oo GDP dalku yahay 4.4, laakiin 2-badii sano uu joogay hoos ayuu u dhacay oo wuxuu gaaray 2017(2.3) iyo 2018(3.1).
Xilligii Xasan Sheekh waxaa dalka maal-geshi ku sameysay Turkiga(Favori oo garoonka ah iyo Al-Beyrak oo dekedda ah), waxaa sahmin loo ogolaaday Soma Oil and Gas, inta uu madaxweyne Farmaajo joogay ma jirin maalgeshi toos ah.
2-badii sano ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh, shaqaale dowladeed oo rasmi ah ayaa la diiwaan-geliyey, 3,000 ka badan ayaa la qoray illaa ay gaareen 5,526, iyada oo mushaarka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka lagu bixin jiray grade halka Madaxweyne Farmaajo aanu weli qaadan wax shaqaale rasmi ah oo tirada rasmiga ah waa sidii hore.
Deyn Cafinta: Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh waxay dalka dib ugu soo celisay hay’adda lacagta adduunka IMF, taasoo ay la gashay heshiiskii Article IV oo suurtogeliyey inay IMF Soomaaliya ka saxeexato heshiisyadii SMP iyo deyn cafiska. Waxay sidoo kale dib ugu Soo celisay Soomaaliya kaalintii ay ku lahayd iskaashiga Yurub, Afrika iyo Kariibiya Pasifik EU/ACP kaasoo suurtogeliyey inay Soomaaliya caawinaad toos ah ka hesho EU. Waxay ku guuleysatay barnaamijka New Deal kaasoo Waddada u furay inay Soomaaliya iyadu keensato mashaariicda horumarineed, madaxweyne Farmaajo waxaa uu sii waday barnaamijka SMP iyo xiriirka hey’addda IMF-ta iyo bangiga adduunka.
Dhismaha Hey’adaha Dowladda: 2-badii sano ugu horreysay ee madaxweyne Xasan Sheekh waxaa uu saxiixay sharciyo qeyb ka ah dhismaha hey’adaha dowliga ah sida Sharciga degmooyinka iyo gobollada, Sharciga Golaha Adeegga garsoorka, Dhismaha guddiga dib u eegista dastuurka, Sharciga shaqada wasaaradda arrimaha dibadda, Sharciga kalluumeysiga badda Soomaaliya, Sharciga dhisidda guddiga madaxa-bannaan ee xudduudaha iyo federaalka, Sharciga bangiga horumarinta iyo dib u dhiska iyo shuruuc kale halka madaxweyne Farmaajo ay ugu muhiimsaneyd sharciga isgaarsiinta iyo naafada.
Xilligii madaxweyne Xasan Sheekh waxaa la sameeyey tirakoob: Sahankan oo ay sameysay Wasaaradda Qorshaynta intii u dhaxeysay 2013-kii iyo 2014-kii ayaa lagu sheegay in qiyaasta dadka Soomaaliyeed ay yihiin; 12,316,895 (Laba iyo Toban Milyan, Saddex Boqol & Lix iyo Todobaatan Kun, Siddeed Boqol & Sagaashan & Shan Qof).
La Shaqeynta Baarlamaanka: 2-badii sano ee ugu horreysay, madaxweyne Xasan Sheekh waxaa uu saxiixay 9 sharci oo ka soo gudubtay golaha shacabka , halka madaxweyne Farmaajo saxiixay 4 sharci, sidoo kale ma jirin khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne Xasan Sheekh iyo guddoonka, waxaana 4 sano la dhammeystay Guddoomiye Jawaari halka Madaxweyne Farmaajo ay is khilaafeen isaga iyo guddoomiyaha golaha shacabka, taasi oo keentay inuu is-casilo Mr. Jawaari.
Midnimada Dalka: 2-badii sano ee ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh waxaa meel fiican gaaray wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland, laga bilaabo 13 April 2013 markaas oo madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Siilaanyo isku arkeen Turkiga iyo March 2015-kii, waxaa ay labada dhinac is hor fariisteen 7 jeer oo ka dhacay Turkiga iyo Djibouti.
Intii uu madaxweyne Farmaajo xafiiska joogay ma jirin wax wada-hadal ah, bal waxaa dhacday in wasiirka qorsheynta xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya uu soo-saaray warqad deeq bixiyeyaasha looga codsanayey in aan dib loo cusboonaysiin macaamilka gaarka ah ee beesha caalamku siiso Somaliland sida ku xusan heshiiska “new deal”.
Badda: Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa August 28, 2014 dacwad ka dhan dalka Kenya, kuna saabsan muranka dhulka u gudbisay Maxkamadda Cadliga Adduunka ee hoos tagta Qaramada Midoobey, Farmaajo iyo maamulkiisa waa ay sii-wadeen.
Arrimaha 2-bada sano ee Farmaajo lagu ammaanay waxaa ka mid ah safarkii uu ku tagay Jannaayo 2018 dowlad gobolleedyada Puntland iyo Galmudug.
Xiriirka Caalamiga: January 17, 2013: Kaddib safarka Madaxweyne Xasan ee Mareykanka, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in markii ugu horreysey ay aqoonsatay dowladdiisa,
Xiriirka Dalalka Carabta iyo Khaliijka ayaa aad u fiicnaa, Iran iyo faafinta madhabka Shiicada ayaa lala dagaallamay, laakiin maamulka Farmaajo waxaa xumaaday xiriirka uu la leeyahay Sacuudiga iyo Imaaraadka. Afrika waxaa aad u xoogganaa xiriirka Afrika, sidoo kale Muqdisho ka dhacay shirka wasiirrada arrimaha dibadda IGAD. Isla 2-badaas sano waxaan ku biirnay Ururka Maamula Isgaarsiinta Satellityada Adduunka iyo dib u soo noqoshada xubinnimadeena baarlamaanka adduunka.
Xiriirka beesha caalamka iyo madaxweyne Xasan aad ayuu u fiicnaa marka la barbardhigo madaxweyne Farmaajo oo maamulkiisa uu ceyriyey wakiilka qaramada midoobey u fadhiyey Soomaaliya, sidoo kale waxaa xusid mudan in ay dacweeyeen safaarado dhowr ah oo ka howlgala Muqdisho.
Arrinta ugu muhiimsan ee 2-badaas sano uu qabtay madaxweyne Farmaajo waa heshiiska isdhexgalka geeska Afrika. Arrinka kale ee madaxweyne Farmaajo lagu ammaanay waa inuu weli la joogo ra’iisul wasaarihii ugu horreyey dowladiisa halka madaxweyne Xasan ay is khilaafeen ra’iisul wasaarihiisa, waxaase xusid mudan in xukuumadda la dhacday ra’iisul wasaare Shirdoon ay aheyd 10 wasiir halka isbeddelka wasiirrada ee xukuumadda Kheyre ay gaareen 20 wasiir.
Safarrada Dibadda Ah: Madaxweyne Farmaajo waxaa uu markii murashaxa ahaa dhalleeceeyey safarrada dibadda ah ee hoggaanka dalka, laakiin isbarbardhigga waxaa lagu ogaaday in Farmaajo uu 10 safar ka badan yahay Xasan Sheekh, isaga oo 2-badii sano ee tagtay galay 40 safar oo dibadda ah.
Gabaggabo: isbarbardhiggaan 2-bada sano ah oo aan faahfaahintiisa cid walba la wadaagi karno waxaa soo baxday in maamulkii madaxweyne Xasan Sheekh uu ka fiicnaa midka madaxweyne Farmaajo marka la eego amniga, kobaca dhaqaalaha, dhismaha hey’adaha dowliga ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda.
Xigasho: Goobjoog News
Wax badan ka Ogow waqtiga rasmiga ah ee lagu dhawaaqayo Liiska Golaha wasiirada Puntland